विप्लवसँग लुकामारी ! प्रहरी समात्ने, अदालत छाड्ने -
विप्लवसँग लुकामारी ! प्रहरी समात्ने, अदालत छाड्ने
१२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले २८ फागुनमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै नेपाल प्रहरीलाई आदेश छ- ‘विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो, त्यहीँ पक्राउ गर्नू ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले पनि त्यसैअनुसार मुलुकभरका युनिटलाई विप्लवका नेता, कार्यकर्ता समात्न परिपत्र गरेको छ । औपचारिक रुपमा प्रहरी अधिकारीले कुनै घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई मात्रै पक्राउ गरिने बताए पनि आन्धाधुन्ध विप्लव समूहका नेता-कार्यकर्ता पक्राउ परिरहेका छन् । जसले गर्दा अहिले प्रहरी र अदालतबीच ‘जुहारी’ चलिरहेको छ ।
प्रहरीको दुःख कस्तो छ भने विप्लवका नेता-कार्यकर्ता नसमात्दा ‘माथिको’ आदेशको पालना नगरेको आरोप लाग्छ, समात्दा अदालतले छाड्दिइहाल्छ ।
नछाडोस् पनि किन ? राज्यविरुद्ध कसुरमा मुद्दा दर्ता हुन्छ तर, प्रमाणित गर्ने सबुत हुँदैन । कतिपय घटनामा त प्रहरीले गरेको सानो गल्तीले पनि विप्लव समूहका नेताहरु केही समयका लागि भए पनि उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् ।
जस्तै- फागुन १० गते ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालय अगाडि एकजनाको मृत्यु र ३ जना घाइते हुने गरी भएको बम विष्फोटमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले सूर्य भुजेललाई पक्राउ गर्‍यो । महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले उनलाई घटनाको ४ दिनपछि पक्राउ गरेको थियो ।
तर, एसएसपी रविन्द्रसिंह धानुक नेतृत्वको ललितपुर प्रहरी परिसरले भुजेललाई पूर्वजानकारी नदिई उनीविरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दा चलायो, जसका कारण महाशाखाको मेहनत खेर गयो । अभियुक्तलाई विनाजानकारी संगठित अपराधको मुद्दा चलाएको ठहर गर्दै अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट भुजेललाई छाड्न आदेश गर्‍यो ।
तर, भुजेल छुट्नेवित्तिकै अर्को मुद्दामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले पुनः पक्राउ गर्‍यो । उनी नेत्रविक्रम चन्दका पूर्वअंगरक्षक समेत हुन् ।
रोचक घटना त बाँकेमा भयो, जतिवेला बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत छुटेका विप्लव समूहका नेता दानबहादुर फडेरा उर्फ योद्धालाई पुनः समात्न प्रहरीले मानव अधिकार आयोगको कार्यालयमै घेराबन्दी गर्‍यो । आयोगको दाबी अनुसार कोहलपुरका डीएसपी रमेशबहादुर सिंहको नेतृत्वमा गएको टोलीले कार्यालयमै घेरा हालेर फडेरालाई पक्राउ गर्न खोजेको थियो ।
तर, डीएसपी सिंह भने मानवअधिकार आयोगको कार्यालय कोहलपुरमा नभएर नेपालगञ्जमा रहेको बताउँदै आफू त्यहाँ उपस्थित नभएको दाबी गर्छन् । ‘त्यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय नै छ, एसपी सा’बको एरिया हो, मैले नेपालगञ्ज जानु आवश्यक नै छैन’, सिंहले अनलाइनखबरसँग भने ।
डीएसपी सिंहका अनुसार १२ चैतमा पक्राउ परेका फडेरा विप्लव समूहका भेरी ब्यूरो संयोजक हुन् । उनी विप्लव समूहको सैन्य कमाण्डरसमेत भएको प्रहरीको रेकर्ड छ ।
‘बहिर्गमित पूर्वलडाकू उनी विष्फोटक पदार्थदेखि युद्धकलामा एकदमै पोख्त छन्’, सिंहले भने, ‘समूहले नेपाल बन्द आह्वान गरेका वेला कञ्चनपुरमा जन्ती सवार बसमा आगजनी गरेको घटनामा पनि संलग्न उनीविरुद्ध कैलालीमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो, त्यसैले पक्राउ गर्न सादा पोशाकको प्रहरी परिचालन गरेका थियौं ।’
Fri-Apr-2019, 08:16 am मा प्रकाशित, 234 जनाले हेर्नुभयो